Aoka ianareo mpifaninana ho fianarana ho an'ny Firenena - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
« …mivavaha ho an’ireo filoham-pirenena sy ny manam-pahefana rehetra, mba hiainantsika miadana sy mandray feizay omban’ny firaiketam-po tanteraka amin’Andriamanitra sy ny fitondran-tena maotina. Izany no tsara sady sitrak’Andriamanitra, Mpamonjy antsika… » I Tim 2 :2,3 DIEM
Ny fiombonan’ny fiangonana Kristianina eto Madagasikara (FFKM) dia miarahaba ny vahoaka Malagasy rehetra.
Manoloana ny toe-draharaha atrehin’ny firenentsika noho ny fifidianana fihodinana faharoa dia manainga ny mpiray tanindrazana izay manan-jo hifidy sy voasoratra ao anaty lisi-pifidianana, ny FFKM mba hanatanterahan’izy ireo ny adidy sy andraikiny am-pahavitrihana. Endrika fijoroana ho vavolombelona amin’ny fandraisana an-tanana ny raharaham-pirenena izany fa tsy ho mpitazam-potsiny, ry havana.
Mitaona ny rehetra koa, na ny tompon’andraiki-panjakana, na ny vahoaka, na ny mpifaninana ho Filohampirenena mba hanaja sy hampanjakana ny fahamarinana hatrany satria « ny fahamarinana manandratra ny firenena » (Ohab 14:34). Lohahevitra lehibe nodinihan’ny mpanatrika ny Komity faha-41 tany Tsiroanomandidy izany. Ny fampiharana izany indrindra amin’izao fotoam-pifidianana izao, no hiantoka ny fahatoniana sy ny filaminana eto amin’ny firenena.
Miangavy manokana anareo mirahalahy izahy Filoham-piangonana mba ho fianarana amin’ny finoana, fahadiovana, fitiavana ary fahamarinana ho an’ny vahoaka izay hoentinareo rahampitso ianareo. Tsarovy fa zanaky ny Fiangonana ianareo mialohan’ny zava-drehetra. Nambaranareo ombieny ombieny izany.
Marihana ary hamafisina fa tsy manohana na manolotra kandidà manokana ny fiangonana satria misy endrika sasany toa mampiroaroa saina any.
Farany, araka ny Soratra Masina etsy ambony dia manainga ny Kristianina rehetra, indrindra ny zanaky ny fiangonana ao anatin’ny FFKM mba hivavaka hatrany ho an’ny firenena, ary hanao ho vaindohan-draharaha ny asa fampihavanana araka ny 4F (Fieken-keloka, Fibebahana, Fahamarinana, Fihavanana) araka ny notapahin’ny mpanatrika tany Tsiroanomandidy.
Mirary koa krismasim-piadanana sy fandriampahalemana ho an’ny tokantrano tsirairay avy izahay. Ilay Teny tongo nofo anie honina marina eo anivontsika (Jao 1.14)
Antananarivo, faha 12 desambra 2018
Manaraka ny sonia